Madaxweynaha Cusub Ismaamulka Somalida Ogadeeniya, oo ay Dadweynuhu u Muujiyeen Taageero Xoog leh – Rasaasa News
Jul 20, 2010 Madaxweynaha Cusub Ismaamulka Somalida Ogadeeniya, oo ay Dadweynuhu u Muujiyeen Taageero Xoog leh
Cabdi Maxamed Cumar oo xiliyada qaar ahaa ninka loogu neceb yahay degaanka Ismaamulka Somalida Ogadeeniya, ayaa waxaa uu noqday madaxweynihhi ugu horeeyay ee marka laga reebo Cabdulahi Maxamed Sacdi, hela dhambaala taageero ah oo loogu hambalyeynayo noqoshada madaxweynaha degaanka. Tolow maxaa keenay?
“Somalidu been way sheegtaa murtidase been kuma sheegto”, marka ay sheegayso Somalidu kartida ruuxa ayey tidhaahdaa “Hebal dil iyo daynba wuu lee yahay.” Hadalkaas oo macnihiisu yahay waxyeelada dadka qaarkii ay bulshada u gaystaan waxaa lagu iloobaa waxtarkooda kale, waxbana lagama soo qaado dhibka ruuxa marba hadii uu waxtarkiisu ka bato waxyeelada ama khaladaadka ka yimaada waxaa tirtira wanaagiisa.
Waxaanu si xog ogaal ah u waraysanay dadka aqoon u leh madaxweynaha la doortay, waxayna sheegeen in Cabdi uu yahay nin shaqo badan, oo qalbi wanaagsan laakiin ceebtiisu tahay dulqaad yari. Cabdi Maxamed Cumar, waxaa uu ku doodi jiray in nabad loo baahan yahay, cidii nabada diidanaydna si niyad ah ayuu ula dagaalamay, waxaana maanta muuqata in nabadii uu sheegi jiray ay maanta dadweynaha Somalida Ogadeeniya kuligood fahmeen.
Sida ay qabaan dadweynaha degaanku waa ninka keenay nabada ka dhalatay Ismaamulka Somalida ee dhexmartay Jabhadaha dagaalka ku jiray iyo dawlada Itobiya. Waxaana la sheegay in madaxweynihii isaga ka horeeyey uusan xiisaynaynin, taas oo loo micnaysan karo in Cabdi uu yahay ninka ugu daacadsan degaanka Somalida hawsha uu ku jirayna ay niyad ka ahayd iyo dadweynaha u danee.
Cabdi sida uu khudbadiisa ugu horeysay kolkii la doortay ku sheegay in uu xooga saaridoono dhinaca nabada, taas oo ah meesha ay ka timid guushiisa madaxweynenimo. Sida la sheegay, Cabdi masuuliyiinta ururada nabada qaatay aad buu u soo dhaweeyey, isaga oo aan dib u eegaynin colaadii dhextiil iyo waliba dacaayadihii hore.
Cabdi Maxamed Cumar ayaa haysta shacbiyad aad u tiro badan oo taageersan madaxweynenimadiisa diyaarna u ah in ay la shaqeeyaan.
Waxaa kale oo iyana ay maanta isku fikir yihiin ama garab taagan Madaxweynaha Jabhadihii dagaalka ka waday degaanka ee sida ay Itobiya sheegi jirtay hortaagnaa nolal laga sameeyo degaanka Somalida Ogadeeniya.
Waxaa kale oo xiligan aan jirin mucaar ka jira dhinac Ismaamulka Somalida Ogadeeniya, wadaxweynihii xilka laga qaadayna waxaa uu xilka u wareejiyey si kalsooni leh kolkii isaga laga doortay Cabdi oo haatan ah madaxweynaha.
Madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar waxaa laga yaabaa in ay caqabad ku noqdaan Maxamed Cumar Cismaan iyo taageerayaashiisa tirada yar. Waxaase lagu kalsoon yahaya in Cabdi oo haysta taagero dad badan oo dibad iyo gudaba leh in uu si sahal u soo af jaridoono kooxda Jwxo-shiil.